bvunzo otomatiki zano reanogadzira mapurojekiti
Kuru Kushandisa Michina Kwayedza Automation Strategic YeaAgile Mapurojekiti
Kwayedza Automation Strategic YeaAgile Mapurojekiti
Uyu Muedzo Wekushandisa otomatiki Strategic inotora inoenderera yekuendesa modhi ine akawanda akachimbidzika zvikwata.
Muzvinyorwa zvakapfuura, kuwedzera Agile Bvunzo Sarudzo gwaro pamwe ne maitiro ekumisikidza iyo QA basa kubva pakutanga kweiyo agile chirongwa uye kuyedza kunoitwa otomatiki ndechimwe chezvinhu zvakakosha mukutanga setup.
Mune ino Bvunzo Yekuzvishandisa Seti yemuenzaniso, ini ndinonyora pasi akakosha mapoinzi ekufunga kuti uwane zvakanakisa kubva pakuedza otomatiki kuedza.
Kuzviongorora Kwayedza chiitiko chepakati cheyese nzira yekukurumidza yekuvandudza. Sezvo isu tichienda kunopfuurira kuendesa, test automation inova inonyanya kukosha nekuda kwekukurumidza mhinduro mhinduro iyo iyo inopa kune yekusimudzira timu nezve hutano hwechikumbiro.
Kuti uwane iyi mhinduro nekukurumidza, otomatiki bvunzo dzinofanirwa kuitiswa zvichiramba, dzinofanirwa kukurumidza uye bvunzo mhedzisiro inofanira kuenderana uye kuvimbika.
Kuti uwane izvi, ruzhinji rwechokwadi runofanira kuitwa sechikamu chekuvandudza kwezvinhu zvitsva. Mune mamwe mazwi, kusimudzira uye kuyedza kunofanirwa kuve chiitiko chakabatana, uye hunhu hunofanirwa 'kubikwa mukati' kubva pakutanga nekuona kuti izvo zviri kugadzirwa zvinoshanda uye kuti hazvina kutyora mashandiro aripo.
Izvi zvinoda 'kupidigura iyo test automation piramidhi' nekusundira pasi GUI bvunzo dzinotora nguva yakareba kuita, kudzikisa nhanho eg. API dura iyo inogona kumhanya yakananga mushure meyuniti bvunzo sechikamu chekuvaka kuti ipe iyo yekutanga nhanho yekuvimba.
Ungasarudza sei bvunzo kuti dziitise?
Ndekupi kwekutanga bvunzo otomatiki kune iripo webhusaiti?
Inofanirwa Kuedzwa Yekushandura Inoitwa neSeparate Yakazvitsaurira Chikwata?
Kwayedza Automation Strategic Kutarisa
Kudzivirira pane kuona - nepo kuyedza kwese kuchifanira kushandiswa kudzivirira kuunzwa kwekukanganisa mukushandisa pakutanga, matekinoroji uye nzira dze izvo zviri kunze kwenzvimbo yechinhu ichi. Pano, nzira dzinotsanangurwa kuti dzibvumidze kukurumidza kuona zvipembenene kana zvikaunzwa muhurongwa uye mhinduro kune budiriro.
Hunhu hunofanirwa kudiwa kupfuura huwandu. Muzviitiko zvakawanda, zviri nani kusunungura nechimwe chinhu chine dombo rakasimba kwete pane akawanda maficha ari akatsetseka. Sechishoma chirevo chekuburitsa, chero chinhu chitsva chakagadziriswa hachifanirwe kunge chakaunza chero kuremara kwekuremara.
Sezvatotaurwa, mhinduro nekukurumidza pamusoro pehutano hwechishandiso yakakosha kwazvo kutsigira kuenderera kwekuendesa, nekudaro, maitiro uye mashandiro atinogona kuwana mhinduro nekukurumidza anogadzirwa.
Imwe nzira yekuwana mhinduro nekukurumidza ndeyekuwedzera huwandu hweyuniti bvunzo, yekubatanidza bvunzo, uye API bvunzo. Aya bvunzo dzepasi-pasi dzinopa mambure ekuchengetedza kuona kuti kodhi iri kushanda sezvanga zvakatemerwa uye zvinobatsira kudzivirira kutadza kupukunyuka mune mamwe matemba ekuyedzwa.
Yuniti Miedzo inoumba hwaro hweyedzo otomatiki kumatunhu akakwirira.
Chinhu chechipiri chekuvandudza chiri kumhanyisa bvunzo dzekudzokororazve uye zvichiteerana nedanho reKuenderera Kwekubatanidza, ona gare gare. Zvekuzviongorora Kuyedza hakufanirwe kuonekwa sebasa riri roga, asi panzvimbo pechinhu chakabatana chakabatanidzwa muSDLC.
Tsanangudzo yeRegression Packs
Automated regression bvunzo ndiwo musimboti weTest Automation Strategy.
Utsi Kudzvinyirira Pack
Kudzvinyirira mapakeji anoshanda seyehutsanana cheki kuti iko kunyorera kunogona kutakurwa uye kuwanikwe. Zvakare, angori mashoma akakosha mamiriro anofanirawo kumhanyiswa kuve nechokwadi chekuti application ichiri kushanda.
Chinangwa chehutsi bvunzo kurongedza kubata zviri pachena zvinhu, sekushandisa kwete kurodha, kana zvakajairika mushandisi kuyerera hakugone kuitiswa; nekuda kweichi chikonzero, bvunzo dzeutsi hadzifanirwe kuramba dzichipfuura Maminitsi mashanu kupa mhinduro nekukurumidza kana chimwe chinhu chikuru chisiri kushanda.
Iyo yeutsi bvunzo kurongedza inomhanya pane yega deploy uye inogona kuve musanganiswa weAPI uye / kana GUI bvunzo.
Inoshanda Regression Packs , Iyo inorehwa kutarisa mashandiro echishandiso zvakadzama kupfuura kuyedzwa kweutsi.
Akawanda ekudzoreredza mapakeji achavepo nekuda kwezvinangwa zvakasiyana. Kana paine zvikwata zvakawandisa zvinoshanda pazvikamu zvakasiyana zvechikumbiro, saka zvine hungwaru panofanira kuve neakadzokororwa mapakeji anogona kutariswa munzvimbo iri kushanda timu.
Aya mapakeji anofanirwa kukwanisa kumhanya mune chero nharaunda uye uye kana zvichidikanwa, chero hunhu hwehunhu hunoramba hwakaenzana munzvimbo dzese. Ivo vanourawa kakawanda pazuva uye havafanirwe kugara kwenguva isingapfuure maminetsi gumi nemashanu kusvika makumi matatu.
Sezvo izvi zviedzo zvinoshanda zvakanyatsotsanangurwa, zvino zvinotora nguva yakareba kuti zvimhanye saka, zvakakosha kuve neruzhinji rweyedzo dzekushanda paAPI layer apo bvunzo dzinogona kuitwa nekukurumidza kuti tikwanise kuva mukati me Maminetsi gumi nemashanu kusvika makumi matatu muganhu wenguva.
End-to-End Kudzvinyirira Pack, iyo inoedza iyo yese application seyakazara. Chinangwa cheiyi bvunzo ndechekuona kuti zvikamu zvakasiyana zvechikumbiro izvo zvinobatana kune akasiyana dhatabhesi uye echitatu-bato kunyorera zvinoshanda nemazvo.
Iwo End-to-End bvunzo haina kuitirwa kuyedza ese mashandiro sezvo iwo atove akaedzwa mune anoshanda regression mapake, zvisinei, aya mabvunzo 'akareruka-kurema' ayo anongotarisa shanduko kubva kune imwe nyika kuenda kune imwe uye mashoma yezviitiko zvakakosha zvakanyanya kana nzendo dzevashandisi.
Iyi bvunzo inowanzoitwa kuburikidza neGUI, sezvo ivo vari kutarisa mashandisiro avashandisi sisitimu. Iyo nguva yakatorwa yekuita izvi inogona kusiyana kubva kune chimwe chikumbiro kuenda kune chimwe asi ivo vanowanzo mhanya kamwe pazuva kana husiku.
Kwayedza Automation Strategic yeMazhinji Multiple Agile Matimu
Automated Unit Miedzo
Test Automation inotanga padanho reyuniti. Yuniti bvunzo dzinofanira kunyorwa nevanogadzira chero chinhu chitsva chakagadzirwa. Aya maYuniti Ekuyedza anoumba hwaro hweakakura otomatiki maitiro ayo anotenderera nzira yose kusvika kuSystem GUI Tiedzo.
Iri ibasa revagadziri kuona kuti pazvinhu zvese zvitsva zvinogadziridzwa, seti yekubatana uye yakasimba Yuniti Test yakanyorwa kuratidza kuti kodhi inoshanda sekufunga uye inosangana nezvinodiwa.
Yuniti Miedzo inopa yakanyanya ROI kuchikwata sezvo ivo vachikurumidza kumhanya, zviri nyore kuchengetedza uye kugadzirisa (sezvo pasina kutsamira) uye kana paine zvikanganiso mukodhi, inokurumidza kupihwa yekudzosera kunogadzira.
Yuniti bvunzo dzinoitwa pamushanduri wemuchina pamwe neiyo CI nharaunda.
Automated Integration / API kana Service Bvunzo
Nepo maYuniti Ekuyedza akavakirwa pakuyedza mashandiro mukati mekirasi, Yekubatanidza Miedzo inoumba inotevera nhanho kumusoro kubva kuYuniti Tests kuyedza makirasi ayo pamwe chete anoita chikamu kuendesa chidimbu chebasa. Iyi bvunzo inoitwa chete kana maYuniti Yedzo yamhanya ikapfuura.
Zvekuedzwa zveSevhisi zvinowanzoitwa paAPI layer pasina kupindira kweiyo GUI webhu interface. saka bvunzo dzinogona kukwanisa kuratidza mashandiro mune yakachena fomu uye nekuti bvunzo dzinotaura zvakananga kune izvo zvinhu, ivo vari kukurumidza kuita uye vanozove chikamu chekuvaka.
Pazvinenge zvakakodzera, kuseka senge wiremock ichashandiswa kuratidza kutsamira kweimwe 3rdmasystem eparty uye kana iwo ekudzika masisitimu asingawanike ekupa iyo data inodiwa kuti uongororwe.
Kubatanidza Kuyedza uye / kana Service Bvunzo kunogona kumhanyisa pamushini wemugadziri futi uye kuve chikamu chekuvaka, asi kana ikatanga kutora nguva yakareba, saka zviri nani kumhanya pane iyo CI nharaunda.
Zvishandiso senge SoapUI zvinogona kushandiswa kuSystem Bvunzo.
Iyo chaiyo e-commerce application inogona kupatsanurwa kuita akasiyana mashandisirwo kana 'maapplication' ayo anopa akasiyana mashandiro. Pfungwa ye 'App Testing' ndipo panowanikwa boka remiyedzo rinoedza mashandiro eApp rakabatana pamwe nekumhanya richipesana neApp yaunoda. Iri paketi rinobatsira mune zviitiko kana timu ichishuva kuburitsa yega App uye inoda kuziva kana iri kushanda nemazvo.
Yekushandisa Miedzo inowanzo kuda chinongedzo kuti chibatanidzane nezvakasiyana zvikamu, saka zvinofungidzirwa kuti bvunzo idzi dzinoitwa kuburikidza nebrowser pane iyo GUI.
Chinangwa cheApp Testing ndechekuona kuti maficha ekushandisa ari kushanda nenzira kwayo. Nekuti bvunzo dzakarongedzwa nenzira yekupa kuvimba muhutano hwechimwe chirongwa, bvunzo idzi dzinowanzo kunzi Vertical Tests, nekuti ivo vanoita 'pasi' imwe app. Iyo bvunzo yakanyatsoita uye kufukidza kwakakura.
Selenium WebDriver inogona kushandiswa kumhanyisa bvunzo dzakazvimiririra kupokana nebrowser. Ichi chishandiso chinonyanya kufarirwa bhurawuza otomatiki bvunzo uye chinopa yakafuma API kubvumidza kune yakaoma verhisheni.
End-to-End Mamiriro Ekuedzwa
Iyo GUI automated bvunzo iyo inomhanya ichipesana nesystem, inoshanda seyakajairika mushandisi kuyerera, nzendo kana magumo-kusvika-kumagumo mamiriro. Nekuda kwenyaya nerudzi urwu rweyedzo (inokurukurwa pazasi), izvi zvichachengetwa padiki. Iwo ekupedzisira-ekupedzisira magumo akaiswa mune yehusiku regression pack.
Kudzorera iyo Test Yekushandisa Piramidhi
Sechikamu cheTest Automation Strategic, tinofanirwa kuona kudzikamisa huwandu hweyedzo yekushandisa inoitwa paGUI dura.
Ipo ichimhanya bvunzo dzakazvimiririra kuburikidza neGUI inopa bvunzo dzakanaka uye dzine hungwaru maererano nekuenzanisa kusangana kwemushandisi nechishandiso, zvinowanzoitika kune dzakawanda nyaya sezvakanyorwa pazasi:
Nekuti bvunzo dzinovimba neHTML locator kuti dzibvise zvewebhu zvinhu zvekudyidzana nazvo, nekukurumidza kana id ikashandurwa bvunzo dzikundikana, nekudaro dzinotakura yakawanda yekuchengetedza mutengo.
Iyo GUI inogona kuvharira kugona kweye muyedzo yekunyatso simbisa chimiro sezvo iyo GUI inogona kunge isina zvese zvakadzama kubva pawebhu kupindura kubvumidza kuongororwa.
Nekuti bvunzo dzinoitwa kuburikidza neGUI, iyo peji rekutakura nguva inogona kuwedzera zvakanyanya iyo yakazara nguva yekuyedza uye nekudaro mhinduro kune vanogadzira inononoka.
Nekuda kwezvinhu zvataurwa pamusoro, iyo GUI otomatiki bvunzo dzinopa iyo diki ROI.
Iyo Bhurawuza Yekushambadzira Miedzo ichachengetwa padiki uye ichashandiswa kuteedzera maitiro emushandisi kusanganisa zvakajairika mushandisi kuyerera uye magumo-kumagumo zviitiko uko iyo system seyese inoitwa.
maitiro ekusunungura kuburikidza neakarongeka
waterfall kuyedza vs agile kuyedza
ko timu nzira inomira sei?
Mashandisiro Ekushandisa CURL Kutumira API Zvikumbiro
Maitiro Ekunyora uye Kuchenesa Dhata muPython uchishandisa Cryptography Raibhurari
Ndeapi Mhemberero dzeScrum Mune Agile?
Uchishandisa REST-yakavimbiswa kuyedza OAuth 2.0 kuyerera Mienzaniso
Python Zvatemwa Zvinyorwa - Kana, Zvimwe uye Elif
Maitiro ekuTumira maFaira muLinux neSCP uye Rsync